China F720-hery mahery vaika manasa manadio zoom ivelan'ny trano misy 18x40W namboarina fanamboarana sy ny orinasa | Mihoatra
F720-Fahefana mahery manasa fanasan-dàlana zoom zoom any ivelany miaraka amin'ny 18x40W led
Sasao mahery ny manasa jiro ankapobe amin'ny alàlan'ny 18x40W dia famirapiratana avo nefa maivana any an-tokotany. Mety ho an'ny seho anaty trano, fampisehoana, fampisehoana teatra na hetsika an-kalamanjana, jiro Landscape. 18 sombin-kery 40W avo lenta, ny roa Led isaky ny fizarana iray dia afaka miasa miaraka amin'ny rano-mandeha vokany haingana. Tsy jiro fanasan-damba ivelany mahery vaika io, fa azo ampiasaina ho jiro vokarina eo amin'ny lampihazo. Misaotra ny famolavolana optika manokana, manomeza 3,2 ° zoro amin'ny zoro tery, ary 50 ° amin'ny zoro malalaka. Samy manana ny fahatsapana ny andry sy ny vokany misasa be.
Sasao mahery ny manasa jiro ankapobe amin'ny alàlan'ny 18x40W
Fonenana fitaovana tsy misy rano avo lenta sy fampisehoana tantera-drano tsara. Famolavolana fisehoan-javatra tsara indrindra, fanamafisam-peo ambany, fiarovana fiarovana tsy misy rano IP65 Power-con ao anaty sy ny takelaka. Famirapiratana avo miaraka amin'ny fahaizany manasa be, loko mazava sy mitovy. Modely 4 Dimmer misy fahatarana na tsy misy hatak'andro, 0-100% fanalefahana laina ary maimaimpoana flicker.
Ny loko sy lamina manankarena efa voafaritra mialoha an'i Marco, ny roa tarihina tsirairay dia azo fehezin'ny fizarana. Led dia manana fiarovana avo ny hafanana ary afaka manitsy ny famirapiratany miadana araka ny hafanan'ny loha.
Loharano nateraka 18 * 40W 4IN1 RGBW LED Jery ​​​​mitongilana 270 °
Sudin'ny zana-kazo 3.2 ° - 50 ° construction
Fanjifana herinaratra 720W miseho Seho LCD azo ahodina 180 °
fanaraha-maso Data ao amin'ny foibe / Out Sockets XLR 3-pin
Fomba fanaraha-maso DMX512 / mater-Slave / Auto Run / Music Socket Power Powercon tsy misy rano miditra / mivoaka
Mode DMX 19/25 / 61CH Naoty fiarovana IP65
Famirapiratana avo, habe kely, lanja maivana lafiny 508 * 208 * 351 MM; NW: 16 kilao
Ny zoro sy ny toeran'ny vinavina dia azo ovaina malalaka, ary azo ampiasaina ho jiro tetikasa lavitra Fonosana mahazatra: baoritra; tranga sidina raha azo atao
Motera Y-axis 3-phase / motera Nano ； 9-Zone voafehy Fanamarinana
Toerana mety: sehatra, kaonseritra, teatra, jiro ivelany, sns. CE, ROHS
F: Matetika aho mila manafatra indray ny jiro, raha mahatsapa ho faly amin'izy ireo aho, na dia mahazo antoka aza fa isaky ny mahazo vokatra mitovy aho dia tena manafatra ahy, azonao ve izany?
Re: Mazava ho azy! Izahay dia manisy lanjany lehibe amin'ny fiantohana ny fitoniana sy ny fitohizan'ny vokatray, ary ny jiro vaovao izay notsapainay im-betsaka talohan'ny nanapahanay hevitra ny hivarotra amin'ny tsena. Ary hampahafantatra sy hifandray amin'ny mpanjifa fiaraha-miasa izahay raha mila manavao ny jiro, ho an'ny rindrambaiko raha manavao isika dia hitazona rindrambaiko teo aloha hisafidianan'ny mpanjifa.
F: Raha mividy jiro avy aminao aho, mbola mila mandoa hetra aloa eto ve aho?
Re: Miankina amin'ny politika fanafarana firenenao izany. Firenena samy hafa ny politikany dia tsy mitovy, ny firenena sasany raha kely dia tsy ilaina haba. Ary ny faritra sasany dia afaka manome fomba fandefasana entana manokana izay misy ny fanadananay ny haba sy ny haba haba, ka tsara kokoa ny manontany anay.
F: Firy taona no nananganana ny orinasa?
Re: Mihoatra ny jiro natsangana tamin'ny 2010, ary manana traikefa fahazavana R & D mandritra ny 10 taona izahay ary ankehitriny ny vokatra dia vokatra tsy miankina aminay.
Fanaterana entana ao amin'ny Factory
Teo aloha: M52-hazavana farany hazavana mahery vaika 24 * 60W taratra hazavana mihetsiketsika eo amin'ny loha tantely
Manaraka: 660-6 * 60W Pixels mifehy bara zoom zoom mihetsika loha tsy misy rotationg voafetra